I-China Polyester Felt ifektri kanye nabakhiqizi | Huasheng
Igama lomkhiqizo IPolyester Felt
Okokusebenza I-100% Polyester
Ububanzi ubukhulu bufika ku-3.3m
Ubude 50m / roll, 100m / roll noma ngokwezifiso
Umbala obekiwe njengePantone Colour Card
Akudalwanga inaliti engekho
I-CE, REACH, ISO9001, AZO
I-polyester fiber (efushaniswa ne-PET fiber) ifreyimu yokwenziwa etholwe ngokuswayipha kwe-polyester eyakhiwa yi-polycondroll ye-organic dibasic acid notshwala be-dihydric. I-polyester fiber yenziwa ikakhulukazi nge-polyethylene terephthalate.
Imizwa yePolyester iyinalithi eyenziwe yagwazwa yenziwa kusuka kumicu ye-polyester. Imicu ye-polyester inaliti eshaywe ngenaliti ekhethekile yokufaka, eyodwa enamabha amancane ekugcineni. Lezi barbs ukudonsa polyester uqobo, ukukhiya ndawonye ukudala indwangu.
IPolyester izwakale ihlinzekelwa ezinhlobonhlobo zobukhulu nobukhulu ukuze ihlangabezane nezidingo zakho. Inikeza enye indlela ephansi yoboya, futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni eziningi zezimboni nezentengiso. I-Monarch Textiles yenza inaliti ye-polyester yenaliti eyenziwe yazwakala ukuze ihlangabezane nemininingwane yakho.
Imikhiqizo eyenziwe ngePolyester inikezela ngezinzuzo ezahlukahlukene. Akuwona nje kuphela ukuthi i-polyester izizwa ibiza kancane kunokwakuzwa uboya, kepha umuzwa we-sindile obhobozwe ngenaliti unikeza futhi ukumelana nama-asidi e-organic, isikhutha, amabhlokhi namanye ama-oxidizing agents angalimaza impahla.
Ezinye izinzuzo ze-polyester felts zifaka
Ukubekezelela ukushisa okuphezulu
Ukumelana nokugqoka nokukhanya kwelanga
Ilungele izinhlelo zokushisa ezomile
Kuhle kakhulu ekuqoqweni okungcolile
Ihlala isikhathi eside, iguquguquka, kulula ukuyihumusha, ukumelana nokugqwala, ukufakwa, ukhrisimu, ukugeza okulula kanye nezimpawu zokumisa okusheshayo.
Ubuciko be-DIY, isizinda soMshado / Umbukiso, imihlobiso kaKhisimusi, i-Coaster kanye nendawo-mat, izikhwama, izicathulo, izikhwama, iphakheji yezipho, umhlobiso wangaphakathi.
Esedlule: Kucindezelwe uWool Felt